कांग्रेसले जिते बृद्व भत्ता दोब्बर
२०७४ असार ९ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापती तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा जिते बृद्व भत्ता दोब्बर गर्ने बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालीकाको फुलबारीमा आयोजित चुनाबि सभालाई संबोधन गदै नेता देउवाले सो कुरा बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
स्वतन्त्र भएर भोट हाल्न पाउँदैनन् बाजुराका दलित परिवारले
२०७४ असार ९ शुक्रबार, बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको स्वामिकार्तिक गाँउपालिका ३ जुकोटका ७० वर्षीय नन्दे बि.क.ले अहिलेसम्म पनि स्वतन्त्र रुपमा कुनैपनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । उनले धेरै चुनावमा भाग लिए तर एउटा चुनावमा पनि आफूले आफ्नो विवेकले मत हाल्न नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।यसपालीपनि असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । तर उनले यसपाली पनि आफ्नो स्वविवेकले निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने आशा राखेका छैनन् । ... बाँकी अंश»
कञ्चनपुरमा ६६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, मदिरा कारोबार पूर्ण प्रतिबन्ध
२०७४ असार ९ शुक्रबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका ६६ वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले भारतसँग सीमा जोडिएका मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील क्षेत्रको सूचीमा राखी सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाएको हो । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री देउवा धनगढीमा, ७ नम्बर प्रदेशमा चुनावी सम्बोधन, चुनावपछिमात्र काठमाडौं फर्कने
२०७४ असार ९ शुक्रबार, धनगढी । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश नम्बर ७ मा पुगेका छन् । ... बाँकी अंश»
कालीखोला पहिरोमा परी दुई प्रहरीको मृत्यु, दुई प्रहरी बेपत्ता
२०७४ असार ९ शुक्रबार, चितवन । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको कालीखोला नजिकै बिहीबार राति खसेको पहिरोमा पुरिएर दुई प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने दुई प्रहरी बेपत्ता भएका छन् । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसका उम्मेदवार जिताएमात्र विकासको मुहान खुल्छ– रामचन्द्र पौडेल
२०७४ असार ९ शुक्रबार, बुटवल । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले अंगाडि सारेका उम्मेद्वारलाई जिताए विकासको मुहान खुल्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
चुनावको दिन तीनवटा प्रदेशमा मात्रै विदा
२०७४ असार ८ बिहिबार, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन हुने तीन जिल्लामा असार १४ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन हुने तीन प्रदेशमा मात्रै विदा दिने निर्णय गरेको हो । ... बाँकी अंश»
विराटनगरको विरासत जोगाउनेमा निश्चिन्त काँग्रेस, विरासत उल्टिनेमा ढुक्क एमाले
२०७४ असार ८ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको जन्मभूमि हो मोरङ । त्यसैमाथि पनि मोरङको विराटनगर त झनै काँग्रेसको उद्भव थलोको रुपमा चिनिन्छ । वि।सं। २००३ साल फागुन २० गते नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपल्ट विराटनगरका औद्यौगिक मजदूरहरूले बिहान सवा सातबाट सुरु गरेको ऐतिहासिक हड्तालबाट नै नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको थियो । ... बाँकी अंश»
भोट माग्ने नयाँ शैली : धान रोपिरहेको खेतमै पुगे नवलपरासीका उम्मेदवारहरु
२०७४ असार ८ बिहिबार, नवलपरासी । उम्मेदवारहरु चुनाव आएपछि के मात्रै गर्दैनन् उम्मेदवारहरु भन्ने कुरा हिजो आज नवलपरासीमा देखिन थालेको छ । उनीहरु मतदातालाई आफ्नै पक्षमा प्रभाव पार्नको लागि अहिले फरक शैली अपनाउन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
'सरकारले जनतालाई धेरै अन्यौलमा पार्‍याे, अब जनताले एमालेबाहेक कसैलाई पत्याउँदैनन्'
२०७४ असार ८ बिहिबार, पाँचथर । नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुबास नेम्बाङले तिनै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
कानूनी कमजोरी : नगरप्रहरीले स्थानीय कर्मचारीको निर्देशन मान्नु नपर्ने !
२०७४ असार ८ बिहिबार, काठमाडौं । नेपालको संविधानले अहिले स्थानीय तहलाई भरपुर अधिकार दिने क्रममा नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सुरक्षाको लागि विना हतियार नगरप्रहरी राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ । यस अघिमने भन्दा पृथक यस व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर नगरप्रहरीको महत्वलाई अझ बढाईएको छ । ... बाँकी अंश»
फोरम वडाध्यक्षका उम्मेदवार प्यानल सहित काँग्रेसमा प्रवेश
२०७४ असार ७ बुधबार, बाँके। संघिय समाजबादी फोरमबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२का वडाध्यक्ष सहितको ५ जनाको प्यानल नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । पार्टी प्रबेश गर्नेहरुमा संघिय समाजबादी फोरमबाट वडा नं १२ का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार फरहान हुसेन खाँन , वडा सदस्यका उम्मेदवार महिला सदस्य मुन्नी देवी बर्मा , सदस्य किस्मतुल खाँ, डेढराम अहिर र समशुल भङगी सहितका छन् । ... बाँकी अंश»
सिकायत नआउने ढङ्गबाट काम गर्नुस् : प्रमुख आयुक्त डा यादव
२०७४ असार ७ बुधबार, काठमाडौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले दोस्रोचरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तामा देखिएको सहभागिता उच्च प्रशंसनीय रहेको बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सुक्ष्म अनुगमनकर्ता अभिमुखीकरणको निर्वाचन आयोग परिसरमा आज शुभारम्भ गर्दै उनले भने– “उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता निकै शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको छ।” ... बाँकी अंश»
भीम रावलको गृह जिल्लामा काँग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एमालेका ५ जना निर्विरोध
२०७४ असार ७ बुधबार, अछाम । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको गृह जिल्ला अछाममा पाँच जना निर्विरोध भएका छन् । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मैदानमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन पछि पाँच वडा सदस्य निर्विरोध भएका हुन् । मंगलसेन नगरपालिकाका विभिन्न वडामा एमालेका तर्फबाट ५ जना वडा सदस्य निर्विरोध भए । ... बाँकी अंश»
विराटनगर, इटहरी र धरानमा झण्डा गाड्न काँग्रेसले बनायो यस्तो योजना
२०७४ असार ७ बुधबार, इटहरी । असार १४ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले विराटनगर महानगरपालिकासँगै इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसको झण्डा गाड्न विशेष योजना बनाएको छ । ... बाँकी अंश»
आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
२०७४ असार ७ बुधबार, कृष्णपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका बागी उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ... बाँकी अंश»
काठमाडौंको महानगरले टेरेन केन्द्र सरकारको निर्देशन, बढाइछाड्यो बृद्धभत्ता
२०७४ असार ६ मंगलबार, काठमाडौं । जेठ १८ गते सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन विपरित काठमाडौं महानगरपालिकाले बृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको महानगरको नगरकार्यपालिकाको बैठकले विगत वर्षहरु देखि ८८ वर्ष उमेर पुगेका बरिष्ठ जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान स्वरुप वार्षिक रु. १० हजार महानगर भत्ता एकमुष्ठ प्रदान गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७३।७४ का लागि उक्त भत्ता रकममा वृद्धि गरी रु. १२ हजार पुर्याउनेर सो भत्ता रकम तत्काल वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
युवा स्वरोजगार कोषबाट कार्यकर्ताको भरणपोषण, सरकारको आधा कर्जा जोखिममा
२०७४ असार ६ मंगलबार, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने युवा स्वरोजगार कोषको नाममा कार्यालयीय खर्च लगायतको लागिमात्रै ८ करोड ९७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २०६५ सालमा युवाहरुलाई विना धितो पैसा दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले गठन भएको सो कोषको आफ्नै प्रतिवेदन अनुसार पनि उसले अहिलेसम्म झण्डै एक दशक पूरा हुनै लाग्दा ३१ हजार ४ सय ४० जनालाई रोजगार बनाएको तथ्यांक छ । ... बाँकी अंश»
भरतपुर मतगणना प्रकरण : सर्वोच्चले माग्यो सक्कल कागजात
२०७४ असार ६ मंगलबार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने विवाद निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट सक्कल कागजात मागेको छ । ... बाँकी अंश»
एमाले उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा : सुत्केरीलाई विशेष सुविधा
२०७४ असार ६ मंगलबार, तुलसीपुर । तुलसीपुर उप महानगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डेले सुत्केरी महिलाहरुका लागि विशेष आरक्षणको कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताएका छन् । घरमै सुत्केरी गराउँदा महिला तथा बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकोले यस्तो कुरालाई निरुत्साहित गर्नका लागि हरेक सुत्केरी महिलालाई पाँचहजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता दिइने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»